ဆိုလာပြားများ၏ အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံ - သတင်း - Cixi City Rixing Electronics Co., Ltd
1) Tempered Glass(ဆိုလာပြား)
၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်သည် ပါဝါထုတ်လုပ်ခြင်း၏ ပင်မကိုယ်ထည် (ဘက်ထရီကဲ့သို့သော) ကို ကာကွယ်ရန်နှင့် ၎င်း၏ရွေးချယ်မှု လိုအပ်သည်။ 1. အလင်းပို့လွှတ်နိုင်စွမ်းသည် မြင့်မားရမည် (ယေဘုယျအားဖြင့် 91% ထက်ပိုသည်)။ 2. Ultra white steel ကုသမှု
Tempered Glass နှင့် ပါဝါထုတ်လုပ်သည့် ပင်မကိုယ်ထည် (ဘက်ထရီကဲ့သို့သော) တို့ကို ချိတ်ဆက်၍ ပြုပြင်ရန်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။ ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော EVA ပစ္စည်း၏ အရည်အသွေးသည် အစိတ်အပိုင်းများ၏ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို တိုက်ရိုက်သက်ရောက်သည်။ EVA သည် လေနှင့်ထိတွေ့ရလွယ်ကူပြီး အဝါရောင်ပြောင်းကာ အစိတ်အပိုင်းများ၏ အလင်းပို့လွှတ်မှုနှင့် အစိတ်အပိုင်းများ၏ ပါဝါထုတ်လုပ်ခြင်းအရည်အသွေးကို ထိခိုက်စေသည်။ EVA ကိုယ်တိုင်အရည်အသွေးအပြင်၊ အစိတ်အပိုင်းထုတ်လုပ်သူများ၏ lamination လုပ်ငန်းစဉ်သည် EVA ၏ချည်နှောင်မှုဒီဂရီသည် စံချိန်စံညွှန်းမမီခြင်း၊ EVA နှင့် tempered glass နှင့် back plate ကြားတွင် ခိုင်ခံ့မှုမလုံလောက်ခြင်းကြောင့် စောစီးစွာ အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကဲ့သို့သော သက်ရောက်မှုများစွာရှိပါသည်။ EVA နှင့် အစိတ်အပိုင်းများ၏ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို ထိခိုက်စေပါသည်။
အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာ ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ပင်မလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်သည့်ဈေးကွက်တွင် ပင်မရေစီးကြောင်းမှာ ပုံဆောင်ခဲများဖြစ်သော ဆီလီကွန်ဆိုလာဆဲလ်များနှင့် ပါးလွှာသောဖလင်ဆိုလာဆဲလ်များဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့မှာ အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များရှိသည်။ ပုံဆောင်ခဲများတွင် ဆီလီကွန်ဆိုလာဆဲလ်များသည် စက်ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ် နည်းပါးသော်လည်း သုံးစွဲမှု မြင့်မားပြီး ဆဲလ်ကုန်ကျစရိတ် မြင့်မားသည့်အပြင် ပြင်ပနေရောင်ခြည်တွင် ပါဝါထုတ်လုပ်ရန်အတွက် ပိုမိုသင့်လျော်သည့် ဓါတ်ပုံလျှပ်စစ်အဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်းထိရောက်မှုလည်း မြင့်မားပါသည်။ ပါးလွှာသော ဖလင်ဆိုလာဆဲလ်များသည် စက်ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ် မြင့်မားသော်လည်း ၎င်းတို့၏ သုံးစွဲမှုနှင့် ဘက်ထရီ ကုန်ကျစရိတ်မှာ အလွန်နည်းသော်လည်း၊ ၎င်းတို့၏ ဓာတ်ပုံလျှပ်စစ်အဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်း စွမ်းဆောင်ရည်သည် ပုံဆောင်ခဲဆီလီကွန်ဆဲလ်များ၏ ထက်ဝက်ကျော်သာ ဖြစ်သော်လည်း ၎င်းတို့၏ အားနည်းသော အလင်းရောင်သက်ရောက်မှုမှာ အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။ ဂဏန်းတွက်စက်များပေါ်ရှိ ဆိုလာဆဲလ်များကဲ့သို့သော သာမန်အလင်းရောင်အောက်တွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း၊ ၎င်းသည် အဓိကအားဖြင့် ပါဝါထုတ်လုပ်သည့် ပင်မကိုယ်ထည်နှင့် နောက်ပြားကို ချည်နှောင်ကာ ဖုံးအုပ်ထားသည်။
လုပ်ဆောင်ချက်၊ တံဆိပ်ခတ်ခြင်း၊ လျှပ်ကာနှင့် ရေစိုခံခြင်း (ယေဘုယျအားဖြင့် TPT၊ TPE နှင့် အခြားပစ္စည်းများသည် အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိရပါမည်။ အစိတ်အပိုင်းထုတ်လုပ်သူအများစုသည် 25 နှစ်အာမခံချက်ရှိသည်။ Tempered glass နှင့် aluminium alloy သည် ယေဘုယျအားဖြင့် ပြဿနာမရှိပါ။ အဓိကမှာ နောက်ကျောပြားနှင့် ဆီလီကာဂျယ်ရှိမရှိ၊ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါသည်။)
Laminated အစိတ်အပိုင်းများကို ကာကွယ်ပြီး တံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့် ပံ့ပိုးမှု၏ အခန်းကဏ္ဍအချို့တွင် ပါဝင်ပါသည်။
ဓာတ်အားထုတ်လုပ်သည့်စနစ်တစ်ခုလုံးကို ကာကွယ်ပြီး လက်ရှိလွှဲပြောင်းသည့်ဘူတာရုံ၏ အခန်းကဏ္ဍကို ကစားပါ။ အစိတ်အပိုင်းများ ဝါယာရှော့ဖြစ်သောအခါတွင်၊ စနစ်တစ်ခုလုံးကိုလောင်ကျွမ်းခြင်းမှကာကွယ်ရန် junction box သည် short-circuit ဘက်ထရီကြိုးအား အလိုအလျောက် ဖြတ်တောက်မည်ဖြစ်သည်။ junction box တွင်အရေးကြီးဆုံးအရာမှာ diodes ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ module ရှိ ဘက်ထရီအမျိုးအစားအလိုက် သက်ဆိုင်ရာ diodes များသည် ကွဲပြားသည်။
တံဆိပ်ခတ်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်ကို အစိတ်အပိုင်းနှင့် အလူမီနီယံသတ္တုစပ်ဘောင်ကြား၊ အစိတ်အပိုင်းနှင့် လမ်းဆုံသေတ္တာကြားတွင် လမ်းဆုံကို တံဆိပ်ခတ်ရန်အတွက် အသုံးပြုသည်။ အချို့ကုမ္ပဏီများသည် ဆီလီကာဂျယ်ကို အစားထိုးရန်အတွက် နှစ်ထပ်တိပ်နှင့် အမြှုပ်များကို အသုံးပြုကြသည်။ Silica gel ကို တရုတ်နိုင်ငံတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်သည် ရိုးရှင်းသည်၊ အဆင်ပြေသည်၊ လည်ပတ်ရန်လွယ်ကူပြီး ကုန်ကျစရိတ်မှာ အလွန်နည်းပါသည်။
သင့်တွင် ဖြန့်ဖြူးသူထံ အရောင်းပစ်မှတ်ပြီးဆုံးသည့်ပမာဏ လိုအပ်ချက်ရှိပါသလား။
အမျိုးမျိုးသော ဆိုလာပြား ပစ္စည်းအမျိုးအစားများ